एकैरातमा १० जनासंग यौ’नसम्पर्क ? श्रीमान विदेश हुँदा घरमै गरिन घिनलाग्दो काम ! बच्चाले खोले सबै कुरा (हेर्नुस् भिडियो) – " सुलभ खबर "
नेपाली समाजमा अहिले बैदेशिक रोजगार अनि यससँग जोडिएका भोगाई र यसले निम्त्याएका विभिन्न मार्मिक पक्षहरुसँग सम्बन्धित बिषयले निकै चर्चा पाउने गरेका छन् । परिवारको जीवन राम्रो होस्, सन्तानलाई राम्रो शिक्षा दिक्षा दि’लाउन घर परिवारको चटक्क माया मा’रेर थुप्रै नेपालीहरु बिदेशिन बाध्य छन् । खाडीको तातो घाममा पसिना बगाएर मिहिनत गरेर परिवारको सुखको लागि बिदेसिएका थुप्रै युवाका श्रीमती तथा युवतीका श्रीमान अर्कै च्यापेर, कतारबाट पठाएको पैसा जाँदा घरबार बिचिल्ली भएको घटना अहिले सामान्य जस्तै भइसकेको छ ।
यस्ता घटनाका कारण घर परिवार तथा नाबालक बच्चाले आमा तथा बाबाको मायाबाट बन्चित भएका छन् । मनभरी सपना बुनेर आफ्ना जहान परिवारलाई सुखी राख्नका लागी बिदेसिएका गण बहादुर थिङको सपना चकनाचुर भएको छ । करिब एक महिना अगाडी देखि श्रीमती बेपत्ता भएपछि उनी श्रीमती खोजिदिन हार गुहार गर्दै मिडियामा आएका छन् । १० बर्सिय छोरी र ८ बर्सिय छोराको बिचल्ली पारेर श्रीमती अर्कै युवासँग फरार भएपछि उनी मिडियाको शरणमा आएका हुन् ।
प्राय दैनिकजसो नै फरक फरक व्यक्तिहरु कोठामा आउने गरेको उनका छोरा छोरीले खुलासा गरेका छन् । कमाएको सारा सम्पती कुम्ल्याएर अहिले बेपत्ता भएकी श्रीमतीले बिदेशबाट पठाएको करिब २ लाख रकम र सुन लिएर हिडेको उनको आरोप छ । छोरीका अनुसार आमाले मामा भनेर चिनाउने गरेको र अ’श्लिल क्रियाकलाप गर्दै गरेको पनि देखेको बताएकी छिन् । पिडित थिङले दोषीलाई कारवाही गरेर न्याय पाउँ भनि मिडिया मार्फत अपिल गरेका छन् । बाँकी कुराकानी तलको भिडियोमा हेनुस् :
यो पनि पढ्नुस कोहि व्यक्तिहरु निदाएको बेला झस्किने, चिच्याउने, रुने गर्छन् । निदाएको बेला कसैले आक्रमण गरेको देख्नु, घाँटी थिचेको देख्नु, उचाईबाट लडेको देख्दा मानिसहरु एक्कासी आत्तिँदै बिउझिने गर्छन् । यसको मुख्य कारण ‘हाइपनिक जर्क’ वा ‘स्लीप स्टार्टर’ जस्ता समस्या हुन सक्ने डाक्टरहरु बताउँछन् ।
यस्ता डिस्अर्डरलाई कम गर्नको लागि आइरन, म्याग्नेसियम र क्याल्सियमयुक्त खाना खानुपर्छ । आइरनको कमि पूरा गर्न नियमित दुध, दही, केरा र किसमिस खान सकिन्छ । धेरै कसरत र मोबाइल सुत्नुभन्दा ६ घण्टाअगाडि नै कसरत गर्ने र सुत्नुअघि मोबाइल स्विच अफ वा साइलेन्ट मोडमा राखेर सुत्ने गर्नुपर्छ ।